Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » IMEX Group waxay soo bandhigtay sir
Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Sir IMEX ayaa shaaca ka qaaday
Ka dib tijaabo guuleysatay bishii la soo dhaafay, IMEX waxay ku martiqaadeysaa kaqeybgalayaasha BuzzHub inay ku soo biiraan "Gather Buzz Fest" oo ku yaal barxadda Gather.Town si loo xuso xiritaanka Maalinteeda Buzz ee 'Extreme Innovation Buzz' Arbacada, July 7.
Tani waa markii ugu horreysay ee la soo ururiyo Buzz Fest - IMEX Buzz Day xafladda ka dib.
Gather.Town waa barxad lagu ciyaaro oo leh jawi adag oo muuqaal ah oo lagu xasuusto 80s ciyaaraha arcade.
Ka soo qayb galayaashu waxay doortaan avatar, waxay doortaan labbiska, waxayna u baxaan kumbuyuutarrada weyn ee aan laga aqoon miiskooda.
IMEX's Gather Buzz Fest wuxuu leeyahay qol ciyaaraha, teendhada raaxada dambiga, teendhooyinka muusikada, jardiinooyinka iyo boodboodka bilaashka ah ee jasiiradda. Milkiilayaasha eeyaha waxaa lagu casuumay inay keenaan shaashadooda nolosha dhabta ah shaashadda halka muusikiisteyaashu ay ku meereysan karaan hareeraha dabka. Ma jiraan wax kudaris ah, soo degsasho ama barnaamijyo ayaa loo baahan yahay maaddaama marin haynta la xakameynayo iyadoo la adeegsanayo fallaadhaha furaha.
Kaqeybgalayaasha munaasabada 'Swapcard's Evolve Homecoming event' ayaa sidoo kale kubiiri doonta Gather Buzz Fest iyadoo qayb ka ah dhacdooyinka labada bulsho ee wadajira - oo ah kii ugu horeeyey ee warshadaha.
Carina Bauer ayaa sharraxday: “Iyada oo qayb ka ah ballanqaadkeenna ah inaan tijaabinno magaca shirkadda, waxaan la shaqeynay Gather.Town si aan u gaarsiino 'maaddada sirta ah' ee dhacdo kasta oo nool - isku xirnaan aan macquul ahayn. Waan ognahay inay adag tahay, haddii aysan macquul ahayn, in lagu badiyo iska-horimaadka ku soo boodka saaxiib warshad nolosha dhabta ah laakiin tani waa tan ugu dhow ee aan la kulannay waxaana ku boorrinaynaa qof walba inuu isku dayo. ”
The IMEX Isku soo wada duuboo Buzz Fest waa dhamaadka maalinta kale ee Buzz oo ay kujiraan kuwa ku hadla iyo barnaamijyo ku saleysan mid ka mid ah IMEX's 12 Ballanqaadyadeeda - Cusbooneysiin Ballaaran. Dadka hadlay waxaa ka mid ah Christophe Debard, Madaxa Protospace, Toulouse; Agaasimihii hore ee hal abuurka joornaalka UK Grazia, Suzanne Sykes iyo Farshaxanka Fudud, Frankie Boyle. Barnaamijyada maalmeedku waxay sidoo kale u oggolaanayaan labada bulsho ee 'Evolve' iyo IMEX inay ku soo biiraan kulanno iskudhaf ah, oo ay ku jiraan ganacsade iyo qoraa taxane ah, Cris Beswick, 'Dhisidda Dhaqan-cusub Innovation'.
Gather Buzz Fest wuxuu dhacayaa dhamaadka Buzz Day ee 7 Luulyo. Isdiiwaangeli Maalinta Buzz - bilaash - halkan.
IMEX BuzzHub wuxuu soconayaa illaa Sebtembar isagoo keenaya isku xirnaanta aadanaha, qiimaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo habeeyay 'Wadada Mandalay Bay' ee ku saabsan IMEX America, 9 - 11 November, iyo Smart Monday, oo ay ku shaqeyneyso MPI 8 Nofeembar.